Train dian'i lava indrindra eto amin'izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Europe > Train dian'i lava indrindra eto amin'izao tontolo izao
Lamasinina nandehanany lava indrindra eto amin'izao tontolo izao dia tena lava! Ireo nandehanany afaka andro maromaro ka hasarony an'arivony kilaometatra.
Noho izany, eto no nandehan'ny izay mandray ny lava indrindra ao amin'ny Eoropa, Asia, Aostralia, ary ny Etazonia.
1: Trans-Siberia Express no lava indrindra dia fiaran-dalamby
Elanelana: 5,722 kilaometatra
Duration: 6 andro +
Ny dia lavitra indrindra eto amin'izao tontolo izao dia manomboka any Moskoa ary vita ao Vladivostok. Voalohany indrindra, mila ny 6 andro vao vita. Mpandeha momba izany Eoropa dia mandalo ny fotoana maro faritra. Ny endriky ny eo amin'ity dia ity ampidiro ny Tendrombohitra Oural ary Farihin'i Baïkal. Fiaran-dalamby noho izany dia hiala isan- 48 ora.
Farihin'i Baïkal: Ny farihy lalina indrindra eran-tany
Elanelana: 1,200 kilaometatra
Duration: 3+ andro
izany handeha lavitra Azia Atsimo-Atsinanana amin'ny alalan'ny avy any Bangkok any Singapore. Mijanona ao amin'ny renirano Kwai ny lamasinina ary Kuala Kangsar. Faharetan'ny lavitra na 3 na 4 andro. Fanampin'izany, Nandeha lavitra matetika maka toerana ny faran'ny herinandro. koa, ny zavatra ilaina dia tsy miankina ary voaravaka tsara anefa. Koa satria voalamina tsara ny zavatra ilaina dia ny tsara indrindra mety amin'ny mpandeha irery.
Bruxelles any Lille Lamasinina
Antwerp ho any Lille Lamasinina
Lyon any Lille Lamasinina
3: Ny lamasinina lava indrindra any Kanadiana
Elanelana: 2,700 kilaometatra
Duration: 3 andro
Voalohany indrindra, tsy misy WIFI ity dia namakivaky. Noho izany, miomana ny mandany fotoana mijery ny toerana manodidina. satria ny tendrombohitra, ala sy ny tontolo Kanadiana ho hitanao dia mahatalanjona. Ilay dia manomboka amin'ny Vancouver ary mifarana any Toronto. Ankafizo ny aina natory fiara, raha mitoetra mahazo momba ny fiainana ny moose, diera ary na orsa.
4: Fiaran-dalamby lava indrindra any California Zephyr
Elanelana: 2,348 kilaometatra
Duration: 51 ora
Io lavitra homarihina indrindra tahaka ny lava indrindra any Etazonia. Ny dia manarona ny mpisava lalana, ny Rockies, ary ny hadilanana. Ny fijanonana lehibe amin'ity dia ity dia i Denver, Salt Lake City, Reno, ary Sacramento.
5: Indian Pacific: Sydney any Perth (Aostralia)
Elanelana: 2,704 kilaometatra
Duration: 65 ora
Izany lava indrindra lamasinina dia manasongadina ny lava indrindra lalamby mihinjitra ny mahitsy lalana eto amin'izao tontolo izao. Voalohany, Mpandeha mahazo ny hiaina ny sakan'ny Aostralia. Fanampin'izany, toerana manodidina dia ahitana riandrano, ala sy tendrombohitra manga. Noho ny lavany, maro ireo fototra fiatoana ity lalana. Anisan'izany ny fijanonana Broken Hill, Adelaide, Barossa Valley, Kalgoorlie, mahandro, ary Rawlinna. Train Tickets Ary noho izany dia lafo vidy amin'ny vidin-javatra dia manomboka amin'ny over $600.
6. Vivek Express: Dibrugarh ny Kanyakumari (India)
Elanelana: 2,633 kilaometatra
Duration: 82 ora
Toy izany koa ny Indian Pacific, fiaran-dalamby ity no lava indrindra nandeha fiarandalamby tao India. Satria mandeha ny halavan'ny manontolo India sy manana eo ho eo ny hafainganam-pandeha ny 32 KM isan'ora. Mifanohitra amin 'lava hafa lamasinina nandehanany tapakila ho an'ny fiaran-dàlamby ity amin'ny fanombohan'ny $10.
7: Paris-Moscow lava indrindra fiaran-dalamby Express
Elanelana: 1,998 kilaometatra
Duration: 48 ora
Raha fiaran-dalamby io no lava indrindra Trans-European lalana ihany no alehany 2 andro vao vita. Ny fiaran-dalamby miala avy amin'ny Anarana iombonana amin'ny renivohitra ary tonga amin'ny renivohitra Rosiana. Noho izany dia mandeha amin'ny alalan'ny Belarosia dia mila ny Belarosia fahazoan-dàlana mba handeha. Fanampin'izany, dia mila visa hiditra Rosia.
Boky ny lava indrindra lamasinina miaraka Save fiaran-dalamby
Famandrihana fiaran-dalamby ela dia tsy tokony haka fotoana ela. Izany no antony amin'ny Save lamasinina izahay manana fividianana tapakila haingana dingana.
Login amin 'ny tranonkala dieny izao, ary ento 3 minitra mba hitady ny Levitra Train Ticket ho amin'ny alehanareo. Tapakila azo vidiana mampiasa karatra sy ny tena amin'ny fotoana banky vola sy ny maro hafa ny safidy eo amin'ny Save A Train tranonkala.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flongest-train-journeys-world%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ja ny / ru na / tr sy ny maro hafa fiteny.
#Rosia #SINGAPOUR #TAILANDY Aostralia longtrainjourneys trainjourney Train Travel travelfrance
Nandeha lamasinina, Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe